NGABA IMEYILE ITHUNYELWE NGOSUKU LWECOLUMBUS 2020? NGABA IIPOSI ZIVULIWE? - IINDABA
Ngaba imeyile ithunyelwe ngoSuku lweColumbus 2020? Ngaba iiPosi zivuliwe?
Usuku lukaColumbus, maxa wambi olubizwa ngokuba lusuku lwaBemi boMthonyama, luyaphawulwa ngale yr ngoMvulo, Okthobha 12, 2020. Kuba eli liholide kwilizwe lonke, uya kubuza ukuba i-USPS ivuliwe okanye ivaliwe ukuze ithunyelwe ngeposi ngalo mhla. Ngokwe-United States Postal Service iwebhusayithi , I-USPS ijonga uSuku lweColumbus njengeholide, apho abasebenzi banikwa ixesha lekhefu. Indawo yokusebenza iya kuvalwa kwaye iposi ayinakuthathwa okanye ihanjiswe ngenkonzo yeposi ye-USPS. Inkonzo iya kuphinda ihambise kwaye ingenise indawo yokusebenza iya kuvulwa ngeeyure eziqhelekileyo ngoLwesibini, nge-13 ka-Okthobha.
umangalisi mfazi uceba imingxunya
Usuku lukaColumbus lolunye kuzo zonke iholide ezili-10 zomanyano eziphawulwe ngaphakathi eUnited States, apho iimveliso zeposi kunye neenkonzo ze-USPS zingasebenzi; ngokuchasene ne-9 lusuku loNyaka oMtsha, uMartin Luther King Jr. Day, usuku lokuzalwa lukaWashington, uSuku lweSikhumbuzo, uSuku lweNkululeko, uSuku lwaBasebenzi, uSuku lwamaVeterans, uSuku lokuBonga, kunye nosuku lweKrisimesi.
I-FedEx kunye ne-UPS ziya kuhlala zivulekile ngoSuku lweColumbus
Ngelixa i-USPS ingakhethi okanye ihambisa iposi ngoSuku lweColumbus, iFedEx kunye neUPS nganye zivuliwe ngoMvulo, Okthobha 12. I-FedEx 'I-ajenda yeholide ibonisa ukuba wonke umntu kwiimveliso nakwiinkonzo zabo basebenza kwindawo yabo eqhelekileyo yangoMvulo kwiColumbus Day, kungenjalo, iFedEx Smartpost iya kwenza ngezantsi komthuthi ophetheyo.
IiUPS's Ishedyuli yeeholide ka-2020 ibonisa ukuba wonke umntu kwimisebenzi yabo uya kuvulwa njengoko beya kuba njalo ngoMvulo, ngaphandle kweholide ngo-Okthobha u-12.
Ukongeza kwi-FedEx kunye ne-UPS, iNew York Stock Exchange, iNasdaq NYSE Amex, iipaki kwilizwe liphela, kunye nokupheliswa kwenkunkuma zezinye zezona ndawo kulindelweyo ukuba ulindele ukuba zisebenze rhoqo kwaye ngoku azivaliwe ngo-Okthobha u-12.
Amazwe ali-15 aseMelika abhiyozela uSuku lwaBemi boMthonyama Endaweni yoSuku lweColumbus
Le yr, ngokuhambelana Ukugcina izindlu kakuhle , I-14 ithi kunye neSithili saseColumbia bakhethe ukujonga uSuku lwaBantu boMthonyama nge-12 ka-Okthobha, njengelinye okanye kunye neColumbus Day (eyaqala njengeholide yelizwe lonke ngo-1972). La mazwe yiAlabama, iAlaska, iHawaii, iIdaho, iMaine, iMichigan, iMinnesota, iNew Mexico, iNorth Carolina, iOklahoma, iOregon, iSouth Dakota, iVermont kunye neWisconsin. Uninzi lweedolophu zabantu belizwe balandele urhwebo lweholide ngokucocekileyo.
Iholide iyaqatshelwa ngozuko lwaBemi Bomthonyama okanye amaMelika Omthonyama awayehlala kumhlaba onokuthi ekugqibeleni ube yi-United States, kudala ngaphambi kokufika kukaChristopher Columbus. Ngamnye udumo lwembali yezinyanya zakudala zabantu baseMelika (abenza malunga neepesenti ezi-2 zabemi baseMelika ngoku) njengabemi baseMelika, kodwa ukongeza ukwamkelwa okuthe tye komonakalo ogqityiweyo kubantu baseMelika baseMelika kunye nesiko izandla zekoloniyali.
Usuku lweColumbus, okanye uSuku lwaBantu Bomthonyama, lonke ixesha liwela ngoMvulo. Kulapho iholide iya kuthi iqatshelwe kwiminyaka ezayo:
-2021: NgoMvulo, nge-Okthobha yeshumi elinanye, 2021
- 2022: NgoMvulo, Okthobha weshumi, 2022
-2023: NgoMvulo, Okthobha wethoba, 2023
-2024: NgoMvulo, nge-14 ka-Okthobha ka-2024
- 2025: NgoMvulo, nge-13 kaOkthobha, ngo-2025
- 2026: NgoMvulo, nge-12 ka-Okthobha u-2026
- 2027: NgoMvulo, nge-Okthobha yeshumi elinanye, 2027
- 2028: NgoMvulo, Okthobha wethoba, 2028
- 2029: NgoMvulo, Okthobha u-8, 2029
- 2030: NgoMvulo, nge-14 ka-Okthobha ka-2030
Kuyixabiso ukuqaphela ukuba uSuku lukaColumbus / uSuku lwaBemi boMdabu luwela ngosuku olufanayo noMbulelo waseCanada. Lo nyaka, umbulelo ngaphakathi eUnited States uya kuqatshelwa ngoLwesine, Novemba 26, 2020.
Izigaba: Iindaba Iwiki Tech-Iindaba
yayingu raelynn kwilizwi
I-Starbucks iiyure ze-4 zikaJulayi
izinto ezizigidi ezincinane isiqendu 11
ibhola yehla ixesha lentaba
Ixesha le-supergirl 2 kwi-hulu